2 Beresosɛm 31 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Beresosɛm 31:1-21
31 Na wowiee eyinom nyinaa pɛ, Israelfo+ a wɔwɔ hɔ nyinaa kɔɔ Yuda nkurow mu,+ na wokobubuu abosom adum+ twitwaa abosonnua,+ na wobubuu sorɔnsorɔmmea+ ne afɔremuka+ a ɛwowɔ Yuda+ ne Benyamin ne Efraim+ ne Manase+ nyinaa kosii sɛ ɛsae; ɛno akyi no, Israelfo no san kɔɔ wɔn nkurow mu, na obiara kɔɔ n’agyapade so. 2 Afei Hesekia de asɔfo ne Lewifo+ no sisii wɔn nnwuma so sɛnea wɔn nkyekyɛm+ te, ekuw biara ne sɛnea emu asɔfo+ ne Lewifo+ som te, sɛ wɔmmɔ ɔhyew afɔre+ ne asomdwoe afɔre,+ na wɔnsom+ na wɔmfa aseda+ ne ayeyi+ mma wɔ Yehowa asɔrefie hɔ. 3 Na ɔhene de ne kyɛfa a efi n’agyapade+ mu mae sɛ wɔmfa mmɔ ɔhyew afɔre,+ anɔpa ɔhyew afɔre+ ne anwummere ɔhyew afɔre, ne ɔhyew afɔre a wɔbɔ no home nna+ ne asram foforo+ ne afahyɛ mmere,+ sɛnea wɔakyerɛw wɔ Yehowa mmara mu+ no. 4 Afei nso ɔka kyerɛɛ nkurɔfo a wɔtete Yerusalem no sɛ wɔmfa asɔfo+ ne Lewifo+ no kyɛfa mma wɔn na ama wɔadi+ Yehowa mmara so pɛpɛɛpɛ.+ 5 Bere a Israelfo no tee asɛm no ara pɛ,+ wɔde awi mu adikan,+ ne nsã foforo,+ ne ngo+ ne ɛwo+ ne afuw mu nnɔbae+ nyinaa ne ade biara so ntotoso du du bebree bae.+ 6 Na Israelfo ne Yudafo a wɔtete Yuda nkurow mu+ no, wɔn nso de anantwi ne nguan so ntotoso du du ne akronkronne+ a wɔayɛ no kronkron ama Yehowa wɔn Nyankopɔn so ntotoso du du bae. Wɔde bae besum hɔ akuwakuw. 7 Wofii ase hyehyɛɛ akuwakuw no ɔsram a ɛto so abiɛsa+ mu, na wowiei ɔsram a ɛto so ason+ mu. 8 Bere a Hesekia ne mpanyimfo+ no behuu akuwakuw a esum hɔ no, wohyiraa+ Yehowa ne ne man Israel.+ 9 Akyiri yi Hesekia bisaa asɔfo ne Lewifo no nneɛma akuwakuw+ no ho asɛm. 10 Ɛnna ɔsɔfo panyin Asaria+ a ofi Sadok+ fie no ka kyerɛɛ no sɛ: “Efi bere a wofii ase de nneɛma+ no baa Yehowa fie no, nnipa no didi mee+ ma bebree ka,+ efisɛ Yehowa na wahyira ne man,+ na nea aka na esum hɔ pii yi.” 11 Ɛnna Hesekia kae sɛ wonsiesie Yehowa fie adidibea+ hɔ. Enti wosiesiei. 12 Na wɔde nneɛma+ no ne ntotoso du du+ no ne akronkronne no bae nokwaredi+ mu. Lewini Konania ne ɔpanyin a ɔhwɛɛ nneɛma no so, na n’abadiakyiri ne ne nua Simei. 13 Na mpanyimfo a Ɔhene Hesekia hyɛe sɛ wɔmmoa Konania ne ne nua Simei no ne Yehiel ne Asasia ne Nahat ne Asahel ne Yerimot ne Yosabad ne Eliel ne Yismakia ne Mahat ne Benai, na Asaria+ na odii nokware Nyankopɔn fie so panyin. 14 Na Lewini Yimnah ba Kore na ɔda apuei+ pon no ano;+ ɔno na ɔhwɛɛ ayɛyɛde+ a wɔde brɛɛ nokware Nyankopɔn no so, na ɔkyekyɛɛ nneɛma a wɔde brɛɛ Yehowa+ ne akronkronne mu ade kronkron+ no. 15 Na wɔn a wɔhyɛ n’ase ne Eden, Miniamin, Yesua, Semaia, Amaria ne Sekania; wɔn na wobuu wɔn anokwafo+ de adwuma hyehyɛɛ wɔn nsa, sɛ wɔnkyɛ mma wɔn nuanom a wɔakyekyɛ wɔn mu+ no wɔ asɔfo no nkurow+ mu, mma obiara nnya pɛpɛɛpɛ, ɔpanyin ne akumaa nyinaa;+ 16 ɛsono nea wɔde maa mmarima a wɔadi mfe abiɛsa rekɔ+ a wɔkyerɛw wɔn din+ sɛ wɔmmɛsom wɔ Yehowa fie daa sɛnea wɔn adwuma ne wɔn nkyekyɛm te no. 17 Eyi ne asɔfo no nkyekyɛm sɛnea wɔn agyanom abusuafie+ te ne Lewifo+ a wɔadi mfe aduonu+ rekɔ sɛnea wɔn adwuma ne wɔn nkyekyɛm+ te; 18 wɔn mma nkumaa nyinaa ne wɔn yerenom, wɔn mmabarima ne wɔn mmabea, wɔn a wɔkyerɛw wɔn din, asafo no nyinaa, efisɛ adwuma a wobuu wɔn anokwafo+ de hyɛɛ wɔn nsa no nti, wodwiraa+ wɔn ho maa akronkronne; 19 ne Aaron mma,+ asɔfo a wɔtete wɔn nkurow ho mfikyisase so mfuw mu no.+ Kurow biara mu no, woyiyii mmarima bobɔɔ wɔn din sɛ wɔmfa mmarima a wɔyɛ asɔfo no ne Lewifo a wɔkyerɛw wɔn din no kyɛfa mmema wɔn. 20 Na Hesekia yɛɛ eyi wɔ Yuda nyinaa, na ɔyɛɛ nea eye+ na ɛteɛ+ na ɛyɛ nokware+ Yehowa, ne Nyankopɔn ani so. 21 Na adwuma biara a ofii ase nokware Nyankopɔn fie som mu+ ne mmara+ ne ahyɛde no mu sɛ ɔde bɛhwehwɛ+ ne Nyankopɔn no, ɔde ne koma+ nyinaa na ɛyɛe, na esii no yiye.+
2 Beresosɛm 31